रोनाल्डो विश्वकै सर्वाधिक महंगा खेलाडी (२०७३ माघ २३, आइतवार)
कमाइँको मामिलामा रियल म्याड्रिडका पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वका सबै खेलाडीलाई उछिनेका छन्।
फोबर्सले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा रोनाल्डोले आफ्नो चिरपरिचित प्रतिस्पर्धी बार्सिलोनाका लिओनल मेसीलाई मात्र होइन, अन्य खेलका खेलाडीलाई पनि उछिनेका हुन्। बक्सर फ्लोड मेवेदरले खेलबाट अवकाश लिएको र गल्फर टाइगर उड चोटका कारण खराब प्रदर्शनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा रोनाल्डोले सबैलाई पछि पारेका हुन्।
रोनाल्डोले रियल म्याड्रिडबाट ८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पारिश्रमिक लिने गर्छन्। प्रायोजनबाट उनको थप कमाइँ पनि छ। रोनाल्डोको तुलनामा बार्सिलोनाले मेसीलाई ८ करोड १४ लाख पारिश्रमिक दिने गरेको छ।
सन् १९९० यता पैसा कमाउने मामिलामा रोनाल्डोले माइकल जोर्डनलाई पनि उछिनेका छन्। ३१ वर्षीय स्ट्राइकरको केही महिनाअघि मात्र म्याड्रिडले २०२१ सम्म अनुबन्ध सम्झौता लम्ब्याएको थियो। नयाँ अनुबन्धपछि उनले कमाइँको मामिलामा सबैलाई उछिनेका हुन्।
रोनाल्डोपछि मेसी दोस्रो नम्बरमा छन्। मेसीका सहपाठी ब्राजिलका नेइमार २३ औ स्थानमा छन्।
नेपाल पहिलोपटक यु-१९ युथ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा
अर्घाखाँची क्रिकेट एकेडेमी सन्धिखर्कले आयोजना गर्न लागेको प्रथम ए.सि.ए. क्रिकेट टुर्नामेन्टको तयारी तिब्र
माघे संक्रान्तिको अवसरमा गोरु जुधाइ
सन्धिखर्कमा ए.सि.ए. क्रिकेट टुर्नामेन्ट हुने
नेपालले एसिया कप छनोट खेल्ने,कुवेत र ग्वाम फिफाको कारवाहीमा परेसँगै नेपालले पायो अवसर